Ebe ekwentị: Mepụta ebe nrụọrụ weebụ ọrịre ahịa na ibe ọdịda n'ime nkeji iji ekwentị gị | Martech Zone
Nke a nwere ike kpasuo ụfọdụ ndị mmadụ iwe na ụlọ ọrụ m, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ụdị nke na-akwado itinye ego n'ime nnukwu saịtị na atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya. Amaara m obere azụmaahịa ole na ole ka na-aga n'ụlọ ruo n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ dabere n'okwu ọnụ iji kwado azụmahịa dị egwu.
Ebe ekwentị: Mwepụta ibe n'ime nkeji
Azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịhazi oge, mbọ, na itinye ego nke onye nwe ya iji mepụta usoro ire ahịa kachasị mma iji weta azụmaahịa ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, itinye ego na webụsaịtị dị mfe dị ka ijide ngalaba na iwelite ibe ọdịda dị ọcha, dị mfe, na-anabata ekwentị yana kachasị mma. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Ebe ekwentị bụ maka…
Họrọ ndebiri ma ọ bụ malite site na mbụ. Awụnye ndebiri nke emeburu na ọpịpị abụọ.
Malite iwu ibe site n'itinye ederede, onyonyo na vidiyo site na iji nchịkọta ịdọrọ na dobe ha dị mfe.
Mepụta saịtị ahụ na-eji ngalaba omenala gị wee jikọta nyiwe ndị ọzọ ọ bụla ị na-eji.
Hazie nzaghachi akpaghị aka na email ma ọ bụ SMS nsochi.
Zụlite iru gị site na mgbasa ozi na nnomi nke AI chụpụrụ.
Saịtị ekwentị na-ejikọta ndebiri siri ike, nnakọta data, yana ọdịnaya AI na-achụ iji nyere ndị azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ aka iwepụta saịtị ndị na-ebugharị ọrịre ahịa na-agbanwe agbanwe na nkeji.
Ebe ekwentị enyerela ihe karịrị azụmaahịa 10,000 aka imepụta ihe karịrị nde 1 wee gbanwee ndị ahụ n'ime nde ego ha nwetara. Ebe ekwentị bụ ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ụlọ na-enweghị mgbu nke ga-eme ka ị na-emepụta ọtụtụ ụzọ, ọtụtụ ndị ahịa na ndị ọzọ ahịa. Ebe ekwentị na-enyere ndị obere azụmaahịa na ụlọ ọrụ aka:
Mwepụta ibe na nkeji na ngwaọrụ ọ bụla. Ihe ndị na-ewu webụsaịtị ha na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-agbanwe agbanwe ị nwere ike iji wuo saịtị gị n'ime nkeji ole na ole.
Anakọta-eduga na nhọpụta akwụkwọ. Mepụta ibe ndị dị mfe nke na-eduzi ndị ọbịa site na usoro ịre ahịa gị site na nzọụkwụ site na nzọụkwụ mgbe ị na-anakọta data n'akụkụ ụzọ ka ị nwee ike ịgbaso.
Mepụta Ọdịnaya - Ị nwere ike iwepụta nnomi azụmaahịa na-agbanwe agbanwe n'ime obere ọpịpị ole na ole site na iji onye ode akwụkwọ AI nke ekwentị.
Nsochi email - Ọ dịghị mkpa maka mmemme email, sistemụ email arụnyere na ekwentị na-enye gị ohere izipu nsonye na-akpaghị aka.
Nweta Enyemaka - Kpatụ n'ime otu ndị ọkachamara iji nyere aka na oku atụmatụ 1-na-1, nkata ndụ, obodo nkeonwe, na nkuzi kwa izu.
Sistemụ njikwa ọdịnaya ọ bụla (CMS) na-achọ ikike ntinye aka iji kwalite na ịgbakwunye atụmatụ na arụ ọrụ. Ebe ekwentị adịghị iche, yana njikọta emepụtara na Zapier, Mailchimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Mgbasa ozi Facebook, Google Analytics, Hotjar, Calendly, na ndị ọzọ.
Malite nnwale saịtị ekwentị efu gị
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Ebe ekwentị na m na-eji njikọ njikọ m na edemede a.
Tags: nke ọmadọrọ na dobe nchịkọta akụkọfacebook mgbasa oziformsGoogle AnalyticsGoogle ReCaptchahotjaronye na-ewu webụsaịtị ọdịdambido peeji nkenchịkọta ndumailchimpsaịtị ekwentịụdị ire ereonye na-ewu ọwara ire eresaịtị ọrịre ahịastraipuTwilioVimeoweebụsaịtị Nrụpụtayoutubeike
Spocket: Mwepụta na n'enweghị nsogbu ijikọ azụmahịa Dropshipping na Ecommerce Platform gị